DOWNLOAD က S-70B-6 Aegean Hawk ရဟတ်ယာဉ်ဂရိ Navi FSX - Rikoooo
downloads ရယူရန္ 32 126
Delizisis Thanasis et Delizisis ပန်
အက Black Hawk ရဟတ်ယာဉ်၏ရေတပ်ဗားရှင်း။ မောင်းရန်အလွန်တည်ငြိမ်ပြီးသာယာရေတပ်ရဟတ်ယာဉ်, ပြီးပြည့်စုံ!
မစ်ရှင်၌ရှိသမျှသောအမြိုးမြိုး, စစ်မြေပြင်ကနေထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရေးတဆင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအီလက်ထရောနစ်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အသုံးပြုတဲ့အမေရိကန်ကြည်းတပ်စံ၏ Black Hawk ရဟတ်ယာဉ် utility ကိုရဟတ်ယာဉ်။ ဒါဟာသေနတ် 105 မီလီမီတာဟောင်ဝစ်ဇာသယ်နိုင်ပါတယ်။
1978 မှစ. ယနေ့ငှါ, Black Hawk ရဟတ်ယာဉ်ကမ္ဘာတဝှမ်းစစ်ဆင်ရေး၌ရှိသမျှသောဒေသများပေါ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်နှင့်နိုင်ငံအများအပြားတင်ပို့။ အမေရိကန်ကြည်းတပ်အတွင်းမှာပဲ, ထိုသင်္ဘောတို့သည်အနှစ် 2025-2030 သည်အထိဝန်ဆောင်မှု၌တည်နေပါလိမ့်မယ်။
မော်ဒယ် + သံကို + panel ကို + 3D အတွင်းပိုင်းအားလုံး functional
Compatbile FSX နှင့် FS2004 ။ installer ကိုကနေဗားရှင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
Author: Delizisis Thanasis et Delizisis ပန်